musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Alaska Airlines inounza gumi nemaviri jaya Boeing 12-737 jets
Airlines • avhiyesheni • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Sarudzo dzakashandiswa pakuburitsa muna 2023 na2024 dzinoenderera mberi nekuvandudza maonero eAlaska Airlines emari nekusimudzira.
Alaska Airlines iri kuwedzera kukura kwayo kwezvikepe.
Alaska Airlines inoshandisa zvisarudzo kutanga pa12 Boeing 737-9 ndege.
Ndege yesarudzo ikozvino kuzvipira kwakasimba kwa2023 na2024.
Alaska Airlines yazivisa nhasi kuti iri kukurumidzisa kukura kwayo kwezvikepe nekushandisa sarudzo pakutanga kwendege gumi nembiri dzeBoeing 12-737. Ndege dzesarudzo ikozvino kuzvipira kwakasimba kwa9 na2023. Kuwedzera kuzvipira uku kunounza yakazara yeAlaska 2024-737 kurongeka kune 9 nendege, mashanu acho ari kushanda pari zvino.
Alaska Airlines yakazivisa chibvumirano chakagadziriswa neBoeing muna Zvita 2020 kuti iwane makumi matanhatu neshanu Ndege yeBoeing 737-9 pakati pa2021 kusvika 2024, paine sarudzo dzeimwe 52 yekuendesa pakati pa2023 na2026. Gore rino, ndege yendege yakashandisa makumi maviri neshanu yesarudzo, kusanganisira ndege gumi nenhatu muna Chivabvu. Sechikamu cheichi chiitiko, Alaska ichawedzera makumi maviri neshanu sarudzo dzekudzosera iwo akamboshandiswa.
"Tiri kufara kukwidzirisa kukura kweAlaska, tichivakira pane hwaro hwakasimba hwezvemari hwakatigonesa kukunda denda iri," akadaro Nat Pieper, Alaska Airlines mutevedzeri wemutungamiri wenyika yezvikepe, zvemari nemibatanidzwa. "Ndege idzi dzakangwara, dzinotora nguva refu dzichiita bhizimusi redu dzatingaite panguva imwe chete tichichengetedza bhajeti redu rakasimba."
Anonunura 2021 2022 2023 2024 TOTAL
Yekutanga Firm Order 12 31 13 12 68
Dai Option Exercise - - 9 4 13
Nyamavhuvhu Sarudzo Exercise - - 10 2 12
“Boeing inoramba iri shamwari inotyisa kuAlaska. Takatanga kubhururuka makore 737-9 ekutanga mwaka uno wadarika, uye tinofara zvikuru nekushanda kuri kuita ndege, ”akadaro Pieper. "Ndege dziri kupfuura zvatinotarisira - kubva pakunyarara kwakaita injini kumhanya kusvika padanho rakakura ravanopa - uye vashanyi vedu vanovada."
MaAlaska 737-9s akagadzirirwa kutakura vashanyi 178 vane zvigaro gumi nezvitanhatu zveKirasi yekutanga uye zvigaro makumi maviri nezviviri zvePrimiyamu, izvo zvinopa mwero wepamberi weimwe ndege yeUS.